MB 2017 Juun, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Intaan aniga iyo Tammy ku sugaynay goobta u dhow garoonka diyaaradaha ee gurigeenna duulista, waxaan arkay nin dhalinyaro ah oo fadhiya laba kursi oo dhawr jeer ila eegaya. Dhowr daqiiqo ka dib wuxuu i weydiiyay: "Waan ku faraxsanahay, miyaad tahay Mr. Joseph Tkach?" Wuxuu ku faraxsanaa inuu ila hadlo oo wuxuu ii sheegay in dhowaan laga cayriyay bulshada Sabatariyiinta. Wadahadalkayagu goor dhow wuxuu u jeestay sharciga Ilaah - wuxuu ka helay hadaladayda mid aad u xiiso badan in Masiixiyiintu ay fahmi doonaan in Ilaah sharciga siinayo reer binu Israa'iil, in kasta oo aysan si buuxda u ilaalin karin. Waxaan ka wada hadalnay xaqiiqada ah in reer binu Israa'iil ay runtii leeyihiin "dhacdo" hore oo ay dadku inta badan ka fogaadaan sharciga Ilaahay. Way noo cadaatay in taasi Ilaah ku ahayn wax la yaab leh, maxaa yeelay wuu ogyahay sida wax u socdaan.
Waxaan weyddiiyey in sharciga uu reer binu Israa'iil u soo dejiyey Muuse lahaa 613 amarro. Waxa uu ila ogolaaday inay jiraan doodo badan oo ku saabsan baaxadda amarradan ay ku xiran yihiin masiixiyiinta. Qaar ayaa ku doodaya in amarrada oo dhan la ilaaliyo maxaa yeelay dhammaantood waxay ka yimaadeen xagga Ilaah. Hadday taasi run tahay, Masiixiyiintu waa inay xoolaha u huraan oo xidhaan suumanka salaadda. Wuxuu xaqiijiyey inay jiraan fikrado badan oo yaa ka mid ah qaynuunnada 613 ee ay khusayso xagga ruuxa maanta iyo kuwa aan lahayn. Waxaan sidoo kale oggolaannay in kooxaha Sabbatariyiinta kaladuwan ay ku kala qeybsan yihiin arrintan - qaar baa gudniinka loo dhaqmaa; qaar ayaa sabtida ka ilaaliya beeraha iyo ciidaha sanadlaha; qaar waxay qaataan toban meelood meel, laakiin meel labaad iyo saddexaad toona; qaar, si kastaba ha noqotee, dhammaan saddexda; Qaarkood waxay dhawraan Sabtida, laakiin ma aha ciidaha sanadlaha; Qaarkood waxay xusayaan bisha cusub iyo magacyada xurmada leh - koox kasta waxay aamminsan tahay in “xirmada” caqiido ahaan ay kitaab ahaan sax tahay, laakiin tan kuwa kale aysan ahayn. Wuxuu xusay inuu inbadan la halgamayay dhibaatadan oo uu ka tanaasulay qaabkiisii ​​hore ee sabtida; hase yeeshee, wuxuu ka walaacsan yahay inuusan si sax ah u qaban doonin.
Si la yaab leh, wuxuu ogolaaday in dad badan oo reer Sabatow ay khaldan yihiin maxaa yeelay ma aysan qanin in imaatinka Eebbe uu ku jiro jidhka (Qofka Ciise) ayaa dhigay waxa Qorniin loogu magac daray "Axdi Cusub" (Cibraaniyada Cibraaniyada 8,6) sidaas darteedna waxay ku tusaysaa sharciga la siiyay reer binu Israa'iil sidii hore (Cibraaniyada 8,13). Kuwa aan aqbalin xaqiiqadan aasaasiga ah oo raadsata iyadoo la raacayo qawaaniinta Sharciga Muuse (kaas oo lagu daray 430 sano ka dib markii uu Ilaah axdi la dhigtay Ibraahim; eeg Gal. 3,17) in lagu noolaado kuma dhaqmaan caqiidada Masiixiga ah ee taariikhiga ah. Waxaan rumeysanahay in isbadal uu ku yimid wadahadalkeenna markii uu ogaaday aragtidaas (oo wakiil ka ah Sabbatariyiin badan) looma sii adkaysan karo in aan hadda nahay "inta u dhaxaysa kuwii hore iyo axdi cusub" (axdiga cusubi wuxuu la imaan doonaa oo keliya soo laabashada Ciise). Wuxuu oggolaaday inuu ciise runti yahay dhibbanaha dhabta ah ee dembiyadeenna (Cibraaniyada 10,1-3) in kasta oo Axdiga Cusub dhexdiisa laga tirtirayo mahadnaqidda iyo qurbaannada kafaaraggudka laguma xusin, Ciise weliba wuu oofiyey. Sidii Ciise u sharraxay, Qorniinka ayaa si cad u tilmaamaya isaga oo uu dhammaystiray sharciga.
Ninkii dhalinyarada ahaa wuxuu ii sheegay inuu wali su'aal qabo oo ku saabsan dhawritaanka Sabtida. Waxaan u sharxay isaga in aragtida reer Sabatari ay ka maqan tahay fahamka, taas oo ah in fulinta sharciga uu beddelay markii Ciise ugu horreeyey. In kasta oo ay wali ansax tahay, haddana waxaa jira adeegsi xagga ruuxa ah oo sharciga Ilaah ah - iyadoo si buuxda loo tixgelinayo inuu Masiixu fuliyay sharciga la siiyey reer binu Israa'iil; taas oo salka ku haysa xiriirkeenna qoto dheer ee aan la leenahay Ilaah xagga Masiixa iyo Ruuxa Quduuska ah oo ku dhex jira gudaha qoto dheer - qalbiyadeena iyo maskaxdeena. Ruuxa Qudduuska ah waxaan ku noolahay addeecitaanno Ilaah adoo ah xubnaha jidhka Masiixa. Tusaale ahaan: haddii qalbiyadeenna lagu guday ruuxa Masiixa, micnaheedu ma aha inaan jir ahaan jirno.
Fulinta Masiixa ee sharciga waxay keenaysaa addeeciddeenna xagga Ilaah oo laga keenay shaqadiisa qoto dheer oo sii xoog badan ee Masiixa iyo imaatinka Ruuxa Quduuska ah. Masiixiyiin ahaan, adeeciddeenu waxay ka timaadaa wax kasta oo sharciga ka dambeeyay, sida qalbiga, maskaxda, iyo ujeedka weyn ee Eebbe. Waxaan ka garanaynaa tan amarkiisa cusub ee Ciise: «Waxaan idin siinayaa amar cusub oo ah inaad isjeclaataan sidaan idiin jeclaaday» (Yooxanaa 13,34). Ciise wuxuu bixiyay amarkan oo wuxuu ku noolaa sida amarkan u helay aqoonta ah in Ilaah, iyo adeeggiisa dhulka iyo xoogga Ruuxa Quduuska ah, uu ku qori doono sharcigiisa qalbiyadeenna sidaasna u buuxiyo waxsii sheegyada Yoo'eel, Yeremyaah iyo Yexesqeel.
Markii la aasaasay axdiga cusub, kaas oo fuliyay oo soo gabagabeeyey hawshii axdigii hore, Ciise wuxuu beddelay xiriirkeenna xagga sharciga oo wuxuu cusbooneysiiyay qaabkii addeeciddeenna, oo aan aqbalnay dadkiisa. Sharciga jacayl ee salka ku haya jacaylku waligiis wuu jiray, laakiin Ciise ayaa aasaasay oo dhammaystiray. Axdigii hore ee reer binu Israa'iil iyo sharciga ku xidhan (oo ay ku jiraan allabaryo, shukumaanno iyo sanado cafis) waxay u baahnaayeen qaabab gaar ah oo loo meel mariyo sharciga jacaylka ku saleysan gaar ahaan reer binu Israa'iil. Xaaladaha badan, astaamahaas gaarka ah hadda waa kuwo waqtigiisu dhammaaday. Ruuxa sharciga ayaa sii jiraya, laakiin qodobada sharciga qoran ee u baahan nooc gaar ah oo addeecid looma baahna in la raaco.
Sharciga ayaa iskiis u fulin kari waayey; ma beddeli karin quluubtooda; kama hortegi karto guuldarradeeda; kama difaaci karto jirrabaadda; ma go'aamin karin nooca ku habboon addeecista ee qoys kasta oo dunida jooga. Ilaa iyo dhamaadka shaqadii Ciise ee dunidu iyo howsha Ruuxa Qudduuska ah, waxaa jiray siyaabo kale oo aan ugu sheegi karno diinteena aan u qabno Ilaah iyo jacaylka aan u qabno deriskeenna. Kuwa helay Ruuxa Quduuska ah hadda waxay si fiican u fahmi karaan ereyga Ilaah oo fahmi karaan ujeeddada Ilaah ee addeeciddooda, maadaama addeeciddu ay salka ku haysay oo lagu muujiyey Masiixa oo annaga naloogu soo gaadhsiiyay rasuulladiisa isagoo na siinaya buugaagta, in aan ugu yeedho Axdiga Cusub ayaa la sii daayay. Ciise, wadaadka sare ee weyn, wuxuu ina tusaa qalbiga aabaha wuxuuna noo soo dirayaa Ruuxa Quduuska ah. Iyada oo loo marayo Ruuxa Quduuska ah, waxaan uga jawaabi karnaa Ereyga Ilaah qotodheerida qalbiyadeenna annagoo marag ka marineyna ereyga Ilaahay iyo Caadil inuu doonayo inuu barakada u faafiyo qoysaska adduunka oo dhan. Tani waxay ka sareysaa wax kasta oo sharcigu awood u lahaan jiray, maxaa yeelay waxay ka fogtahay ujeeddada Ilaah waxa sharcigu sameeyo.
Ninkii dhalinyarada ahaa ayaa ogolaaday hadaladan ka dibna weydiiyey sida fahamkaani u saameeyo sabtida. Waxaan sharxay in sabtigu u adeegayo reer binu Israa'iil ujeedooyin kala duwan: waxay xusuusisaa abuurista; Waxay xasuusisay markay ka tagtay Masar; waxay xasuusisay cilaaqaadkoodii gaarka ahaa ee ay lalahaayeen Ilaah waxayna siisay xayawaanka, adeegayaasha iyo qoysaska wakhti nasasho jir ahaaneed ah. Muuqaal ahaan xagga akhlaaqda, waxay xasuusisay reer binu Israa’iil waajibaadka ay ku leeyihiin inay soo afjaraan camalkooda xun. Marka la eego diinta Masiixiga, waxay tilmaamtay baahida loo qabo nasasho xagga ruuxa ah iyo dhammaystirka imaatinka Masiixa - adoo ku aaminay badbaadada isaga si ka fiican shaqadooda. Sabtidu sidoo kale waxay astaan ​​u ahayd dhammaystirka abuuridda dhammaadka da'da.
Waxaan u sheegay in inta badan dadka Sabbatariyiinta ah aysan arki karin in qawaaniintii uu reer binu Israa'iil u soo dejiyey Muuse ay ahaayeen ku meel gaar - taasi waa, muddo cayiman oo meel ah taariikhda umadda reer binu Israa'iil. Waxaan tilmaamay inaysan adkeyn in la arko inaysan macno lahayn waqtiyada oo dhan iyo meel kasta oo "laga tago gadhka oo aan la shaacin" ama "in laga sameeyo maro jilicsan afarta gees ee dharka". Markii ujeeddadii Ilaah ee reer binu Israa'iil oo ahayd quruuntii lagu fuliyay Ciise, wuxuu dadka oo dhan kula hadlay eraygiisa iyo Ruuxa Quduuska ah. Natiijo ahaan, qaabka addeecista ee Ilaah waxay ahayd inay caddaalad ku sameyso xaaladda cusub.
Marka la eego Sabtida toddobaad ee toddobaad, Masiixiyadda dhabta ahi kama ay dhaqaaqin inay maalinta toddobaad ee toddobaadkan u qaaddo qayb xiddig (astrological) ah, oo ay u eg tahay in haddii Ilaahay maalin maalmaha ka mid ah ka dhigo midka kale. Halkii loo dooran lahaa maalin lagu sheegayo Quduusnimadiisa, Ilaah hadda wuxuu inagu dhex jiraa Ruuxa Quduuska ah, oo quduus ka dhigaya waqtiga oo dhan. In kasta oo aan urursan karno maalin kasta oo usbuuca ah si aan u dabaaldegno jiritaanka Ilaah, inta badan jameeco Masiixiyiin ah ayaa isu soo baxa si ay u cibaadeystaan ​​maalinta Axadda, oo ah maalinta ugu aqoonsan Ciise markii uu ka soo sara kacay kuwii dhintay, sidaas darteedna ballamihii axdiga hore. oofiyey. Ciise wuxuu leeyahay sharciga sabtida (iyo dhammaan dhinacyada Tawreed) waxay ka dheereeyeen waqti dheeri ah oo caqabado ah in sharciga ereyga ah uusan gaari karin. Xitaa wuxuu kordhiyey amarkii ahaa "Waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada" oo leh "Waa inaad isjeclaataan sidaan adiga kuugu jeclaaday". Tani waa naxariis jacayl aan caadi ahayn oo aan ku jirin 613 amarro (sidoo kale kuma jiraan 6000!). Cibaadada Ilaah ee aaminka ah ee sharciga ayaa ka dhigaysa Ciise diiradda annaga, ee ma aha koodh qoran. Annagu diirada saareyn maalin maalmaha usbuuca ah; waa diiradda aan saarno. Waxaan ku nool nahay maalin walba maxaa yeelay waa nasashadayada.
Kahor intaanan fuulin mashiinnadayada, waxaan ku heshiinay in adeegsiga ruuxiga ah ee sabtida sabtida ay ku saabsan tahay ku noolaanshaha nolol rumaysad Masiixa - nolol ah nimcada Ilaah iyo shaqada cusub iyo qoto dheer ee Ruuxa Quduuska ah ee nagu dhex jira, ayaa laga beddelaa gudaha.
Had iyo goorba waad ku mahadsan tahay nimcada Eebbe ee inaga dhigaysa guud ahaanba madax ilaa lugo.